Podcast 2x15 an'ny Actualidad iPad: Jiro sy aloky ny Apple amin'ny 2015 | Vaovao IPhone
Izao no fotoana hanombanana ny tsara sy ny ratsy an'ny Apple amin'ity taona ity. Fitaovana vaovao, kojakoja vaovao, serivisy vaovao ... Ny tsara sy ratsy indrindra amin'ny taona ao amin'ny orinasa paoma. Izahay dia mamakafaka ny dikan'ny vokatra vaovao (Apple Watch, MacBook, iPad Pro) sy ny fanavaozana ny hafa (iPhone 6s sy 6s Plus, Apple TV), ary koa ny fanovana eo amin'ny haavon'ny lozisialy (iOS sy OS X) mandritra ny fotoana rehetra. amin'ity taona ity, mijery vetivety amin'ny taona ho avy. Halahelo azy ve ianao?
Henoy »2 × 15: Jiro sy aloky ny Apple amin'ny 2015 ″ ao amin'ny Spreaker.
Mandray anjara amin'ity fizarana ity izy ireo:
Jordi (@jordi_sdmac), mpandrindra ny Soy de Mac ary tonian-dahatsoratry ny Actualidad Gadget
Nacho (@nastiolo), tonian-dahatsoratry ny Actualidad iPad, Actualidad iPhone, Soy de Mac ary Actualidad Gadget
Luis (@luispadillablog), mpandrindra ny Actualidad iPad ary tonian-dahatsoratry ny Actualidad iPhone sy Actualidad Gadget
ihany koa Izahay dia mamoaka lisitry ny playlist vaovao amin'ity vanim-potoana ity izay azonao arahana raha tianao amin'ny Apple Music (rohy). Izahay koa manana ny lisitray miaraka amin'ny mozika tamin'ny vanim-potoana voalohany tamin'ny podcast anay tao amin'ny Apple Music (rohy).
Isan-kerinandro dia hanana podcast-tsika ary afaka manaraka azy mivantana ianao Spreaker, mandray anjara amin'ny fanehoan-kevitrao amin'ny chat ary mihaino mazava ho azy isaky ny irinao izany iTunes. Miandry anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 15 an'ny Actualidad iPad: Jiro sy aloky ny Apple amin'ny 2015
Podcast 6x15 an'ny Actualidad iPhone: nidina ny serivisy fahitalavitra mivantana an'i Apple
Ny bateria ivelany tsara indrindra ho an'ny iPhone